Dhaamsa Hattaatamaa WBO Irraa!!Ummataa Oromoo Baldhaaf! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhaamsa Hattaatamaa WBO Irraa!!Ummataa Oromoo Baldhaaf!
Qeerroo oromiyaa deggertoota WBOn biraan nuuf gahaa jedhuu leenci bosonaa WBO n. Haala yeroo ilaalchiisee yeroo ammaa kana moottummaa garboonfataan waraana lafootin nu dhadhabee xiyyaaran nu rukkutuu eegalee waan jiruuf uummaata nagaa rukkutaa jiruu kanaaf mee na hubaattu laata sabaa koo murannoo WBO n qabu isiniin hubachiisuu dirqama nuti tahee warra ABO ergaa moottummaan kun elekopteriin dhawuu eegalee qabsoo teelaati deeyuun isaa hin oolu jettaani abdii kutachuuf raafama jirtan .WBO n qabsoo har’a uummaata isa wajjin diina haleellee asiin gahee kana wantii teelati deebisuuf yaalu anga harraati hin milkaahin jira kanaaf yaalin karaa hudaa nuti falamaa turee bosonati hunda baacha har’aa geenye jirra kanaaf amamoo sababa lafaaf xiyaaran lollii nuti labsame lolli hammaateef teellaati hin deebinu murannoo keenya dhumaa dhumnee oromiyaaf oromoo garbummaati deebiftii uummaata keenya dhiifnee gara dachee ormaati dachee anbaati debiiyun hin jiruu nuti erga lubbuu keenya gumaachinee oromoof oromiyaaf diina keenya ajjeefnee dhachee oromiyaa irraati wareegamuuniyu bilisuummaadha kanaaf taanqiif jeettin dhuftuus soda hin qabnuu hrkaa laachuufis hin jiruu diinati yeroo lolaati bobbaanuyu rasaasa hunda yeroo itti dhokkaasnuu dhumarrati rasaasa tokko ofiif hanbifanna yo nu marsitee nu qabuuf yaaltee tokko sana ofitti dhukkaasne of wareegnaa malee diinaati harka hin laannuu. kanafa yo nuf darbuu baate saba keenyaf akka darbuu abdii qabna kanaaf hangaa lubbuun jirruuti kan oromoof hin taaneef kan oromiyaa garbuummati anbiisuuf diina deggeertuu takkaa bira hin kunnuu silaaf ofiif bilisummaa arguuf lubbuu keenya gumaachine osoo hin taane oromoo garbuummaa waggaa 27 opdo n saba yartuufi ija taatee wajjin garboomsitee kana bilisuummaa gonfachiisuudha kaayyoon WBO kanaaf uummaati keenya qabsoo kanaaf of jabeesuu malee teellaati deebiyuu akka hin qabnee dhaamsa keenya xumuraati qeerroo qeerraansa dhiiraf dabarsina!
Injifannoo kan ummataa oromooti!
Gadaan gadaa xumuraa garbummaati!
Ololaa dhisaa mee ilalaa WBO Lencotaa Ijollee Gujii
ONN LIVE : Sagalee QEERROO Amajjii 15 “Ajajaan Waraana Bilisummaa Oromoo Eeliyaas Gambeellaa kan jedhamu Gujii Lixaatti hidhannoo hiikkatee lola dhaabuun gara uummataatti makame” kan jedhu soba ta’uu miseensonni WBO fi ajajaan WBO Gujii bahaa ni ibsu!
Namnii Kun Dhugaattii Ajajaa WBO Zoonii kibbaa turee? Obsaan caqasaa Dhugaa addaan baafadhaa olola bitamtootaan sammu of hin dhukkubsiinaa. Share walii godhaa. Gantoonni Sabbonummaa Oromoo awwaaluuf yaaliin isaan godhan gonkuma hin milkaa’u.
Amajji 15,2019] “Ajajaan Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa Jaal Goollicha Dheengee jedhama” jedhan miseensotni Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa
Ajaajaan waraana Zoonii Kibbaa Jaal Goollicha Dhengee baatii muraasa dura SBO irratti ibsa laataa turuun kan yaadatamudha. Ajajaa Waraana Bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa Eeliyaasi kan jedhamuu dubbii dharaa ta’uu miseensotni WBO zoonichaa sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo tti himaniiru.
Qophii keenya guyyaa boriitiin dhimma kana irratti qophii qopheeffanne isin biraan geenya.
Nafxanyaa woyyaaneen ukkamsitee turte, ODPn nuti duulchisaa jirti. maqaan magaaloota keennalee gara maqaa nafxanyoonni itti moggaasan deebi’aa Jira.
ODPn Atobusii 20 bittee Adda bayii Masqalti hiriirsitee nu sobde.
utuu Adda bayitti hin baanee hardha Guutuu Oromiyaati kumaatamaan sochoaa kan jiru Awutobusoota: Baankoota nafxanyoota kan akka Zamani fi Abisiiniyaa. akkasumas Haabashaa, Goldeenii fi itiyyo Baaii argaa jirra.
maqaa lafa magaalotaa oromoo jijjiiruu fi diinagdee nafxanyaa guddisuun oromoo gurguratuu yoo ta’ee malee tooftaa siyaasaa mit.